नेपाल-भारत सीमामा पुन: प्रहरीमाथी आ'क्र'म'ण ? ४० भन्दा बढी भारतिय आएर प्रहरीलाई हे'रा'ब'न्दी... - Filmy News Portal Of Nepal
‘नेपाल-भारत सीमामा पुन: प्रहरीमाथी आ’क्र’म’ण ? ४० भन्दा बढी भारतिय आएर प्रहरीलाई हे’रा’ब’न्दी…’
भारतीय नागरिकहरुको समूह ज’बरज’स्ती नेपाल प्रवेश गर्न खोजेपछि सर्लाहीको सीमा सुरक्षार्थ खटिएको सशस्त्र प्रहरीको टोलीले हवाई फा’य’र गरेको छ । सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका–२ पकडी स्थित दशगजा क्षेत्रबाट करिब ३०–४० जनाको समूह नेपाल प्रवेश गर्न खोजेको थियो ।
सो समूहले हु’लहु’ज्ज’त गरी ह’तिया’र खो’स्ने प्रयाससमेत गरेपछि एक राउन्ड हवाई फा’य’र गर्नु परेको हो । सर्लाहीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी मोहनबहादुर जीसीका अनुसार भारतीय त’स्करहरुले नेपालतर्फ सामान लिएर आउन लागेका थिए । उनीहरुलाई सीमामा खटिएको सशस्त्रको टोलीले रो’क्यो । त्यसपछि उनीहरु फर्किए र ठूलो स’मूहमा भारतीय नागरिकहरुलाई ल्याएर आए ।
‘आज विहान करिब ६ बजेतिर त्यो समूहले हाम्रा सुरक्षाकर्मीहरुलाई घे’रा हाल्न खोजेपछि हवाई फा’य’र गरेर भ’गाइयो,’ प्रमुख जिल्ला अधिकारी जीसीले भने । हवाई फा’य’र गरेपछि भारतीय समूह ति’तर’वि’तर भएको र अहिले स्थि’ति सामान्य बनेको उनले जानकारी दिए । सर्लाहीको विष्णु गाउँपालिका–२ पकडी स्थित दशगजा क्षेत्रमा बीओपी सिमराको टोली खटाइएको छ ।